Amin’ny ankapobeny dia fitiavan-tena diso tafahoatra no manosika azy ireny hanaotao foana tahaka izany, hoy i Tatamo Razafindrakoto mpandinika fiarahamonina no sady psikôlôgy. Rehefa maty izy dia mitsahatra tanteraka ny hirifiriny ka izay tavela eo no mizaka ny vokany toy ny vadiny izay voatery mamelona an-janany irery sy miatrika ny fiainana. Tsy mahatanty marary ihany koa ny lehilahy. Porofo mivaingana hita maso nataon’Andriamanitra ny nametrahany ny vehivavy ho loharanon’ny taranaka, miharitra ny hirifiry amin’ny fiterahana fa raha ny lehilahy no nampitondraina vohoka sy miteraka dia efa tsy nisy taranaka intsony teto ambonin’ny tany. Raha fehezina, hoy hatrany ity mpandinika fiarahamonina ity dia mahari-pery kokoa ny ankamaroan’ny vehivavy, vonona ny hiaritra ny mafy raha oharina amin’ny lehilahy.